လိင်ကိုမအာရုံစိုက်ပါနှင့်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
NoFap Incredible, လုံးဝဘဝကအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် NoFap ၌ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်အနည်းငယ်ရွေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုချစ်တယ်၊ ငါမင်းကိုလွမ်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Reddit ကိုဘယ်အချိန်ရောက်မလဲဆိုတာကိုပညာရှိကသိတယ်၊ ငါ့အချိန်ကများလွန်းတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အရက် ၁၅၀ နီးပါးညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သည်။ သွေးဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်၎င်းသည် (၃) ကြိမ်ခေါက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန်မည်သည့်နေရာတွင်မှမရှိတော့ပါ။
ငါအမျိုးသမီးတွေရတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသူအားလုံး fapstronauts ဤဖြေရှင်းချင်တယ်။
A. NoFap + အမျိုးသမီးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း = စိတ်ပျက်စရာနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျထိုအရပ်၌ငါထိုင်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်တကွဖြစ်နိုင်လိုသည်မိန်းမချောလေးကျော် drool တဲ့အခါမှာ 1 ။ ), သင်ဆဲတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်ကိုအစာကျွေးကြသည်သင့်ဦးနှောက်ဆုချီးသော () porn ကဲ့သို့ပြင်းထန်သောမဟုတ်ဆိုသော်ငြားကဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင့်ကိုပြောပြမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှကွံဘေးကနေ, "Mmm ... dat မြည်းကစိတ်ကူးယဉ်တာပဲ၊ တနေ့လုံးတနေ့လုံးနှိပ်ရတာပဲ", သူမ၏ချဉ်းကပ်မဟုတ် - အမှန်တကယ်သူမ၏ချဉ်းကပ်သည်ထက်ပို။ အကျိုးရှိ၏။
၂) သင်နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံရန်အမျိုးသမီးများ၏တရားဝင်မှုကိုသင်ရှာဖွေသည်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုသူတို့ကသင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပေးပါ။ မိန်းမအများစုသည်ဤသို့မပြုလုပ်ကြပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ယုံကြည်မှုမှာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
4 ။ ) ထိုအခါသင်သည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတွေအတွက်သင်ပိုမိုစိတ်မစေမည်ဖြစ်သောဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုရယ်စရာအခြေအနေများတွင်ရယ်စရာအမှုတို့ကိုပြုသောမိန်းမတို့ကိုကျော်ကူးယဉျ, FAP နှင့် / သို့မဟုတ် porn စောင့်နေကြလော့။
လိင် drive ကိုအတူယောက်ျားတွေတစ်ပိုလျှံရှိပါသည်။
တနေ့လုံးအမြိုးသမီးမြားမှာစိုက်ကြည့်နဲ့သူတို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ fapping နဲ့လိင်စွမ်းအင်ဖျောပွနိုငျသောသူယောက်ျားတွေတစ်ပိုလျှံရှိပါသည်။
တစ်ဦးအစွန်းရောက်ရှိပါတယ် ပြတ်လပ်မှု တစ်ဦးအပြုသဘောထုံးစံ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဖျောပွနိုငျသောလူတို့၏။
ဒါကြောင့်သင်ဘာငါ့ကိုပြောပြနေ C. ?
ဤသည်ကိုဖတ်ပါ: စဉ်းစားပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝ - နပိုလီယံဟေးလ်
၁။ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ NoFap သည်ဘယ်သောအခါမှဟောင်းလောင်းမည်မဟုတ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းမင်းတစ်ခုခုကိုပြီးမြောက်သွားပြီလို့ခံစားရလိမ့်မယ်။
၂) သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုကိုရှာဖွေရန်သင်နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့သည့်အတိုင်းထပ်တူပင်ဇွဲရှိခြင်းလော။ သတိရလား ထိုဇွဲသည်သင်၏ဘ ၀ ၌နေရာတိုင်းဖြစ်သည်။ နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်နာရီပေါင်းများစွာကုန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်တစ်နေ့လုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ရသောဖြုန်းတီးထားသောနေ့များနှင့်မတူဘဲသင်အချိန်မည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုမသိသောကြောင့် shit ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။
၃။ အမျိုးသမီးတွေကိုအာရုံမစိုက်တော့တာကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်မိန်းမတွေဟာလူမိုက်ကိုချစ်တယ်။ သူတို့သည်သင့်ထံမှာစုဝေးကြလိမ့်မည်။ အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ တကယ်တော့မိန်းမတစ်ယောက်ကကျွန်မရဲ့နံပါတ်ကိုတောင်းတဲ့အခါငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ အများအားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူမကိုချဉ်းကပ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်။ (အူရှပ်ကဲ့သို့အသံထွက်ရန်တောင်းပန်ပါတယ်)
(၄) သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်သင်သိသောယောက်ျားတစ် ဦး ကဲ့သို့ပင်သံလိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူများသည်ပင်သူ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိပုံရပြီးသူ၏“ စက်ဝိုင်း” တွင်ဖြစ်လိုကြသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်များသောအားဖြင့်လိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမသိဘဲမသိတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
5 ။ ) သင်သည်သင်၏မျက်စိဖမ်းမကြောင်းကိုတဦးတည်းဆင်းလှသောမိန်းမရှာတွေ့လုပျတဲ့အခါမှာ။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် ဒါကြောင့်သင်တို့၏ခြေကိုရွှေ့မည်နှငျ့သငျသူမ၏အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်, ဒုတိယသဘာဝဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျသူမ၏နံပါတ်ရလာလိမ့်မယ်, သင်ဟုတ်ကဲ့ပြောသူမ၏မျှော်လင့်ပါလိမ့်မည်။ ငါမတိုင်မီယုံကြည်မှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ချဉ်းကပ်ဖူးဘူး, ဘဝမှာကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအပေါ်မှာငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အာရုံစူးစိုက်အထိပါပဲ။
အမျိုးသားများအတွက်မုဆိုးတွေဟာကျနော်တို့မိန်းမတို့အဘို့လိုက်ရှာဖို့ရှိသည် - ငါဒီဘက်ခြမ်းကိုနားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုပြပြီးဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ စသည်တို့
သင်အာရုံစိုက်ပြီးရန်လိုခြင်းမရှိလျှင်မိန်းကလေးများကိုသင်မရနိုင်ပါ - ဤအချက်သည်တရားဝင်ငြင်းခုံခြင်း၊ အစောပိုင်းငှက်သည်ပိုးကောင်နှင့်မိန်းကလေးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသေးတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစော်ကားပြောဆိုနေကြတဲ့စုရုံးနေထိုင်ရာ (လူမျိုးစုတိုင်း၊ စိတ်ထဲ) ကိုသင်တွေ့ဖူးပါသလား။ “ မေမေ! LEMME YUM NUMBAH ရ! " - တစ်ခါမျှအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။
ထိုထက်မကပိုများနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဘဝကိုချက်ချင်းလိုက်နာပါ။ NoFap နှင့် Sexmutmutation သည် snowball အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သင်၏ဘဝကဏ္ of တော်တော်များများ၌ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဒီ subreddit ဟာတစ်နေ့မှာ r / gonewild ထက်ပိုပြီးစာရင်းပေးသွင်းသူပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ p, နှုတ်ဆက်ခြင်း။
TL; DR - လိင်ကိုမအာရုံစိုက်ပါနဲ့။